> Resource> iTunes> Olee otú iji tọghata Rhapsody ka iTunes
Bụ ka o kwe m ka mmekọrịta music si Rhapsody na m iTunes otú m nwere ike na-enwe ebudatara music na m iPod? M zụrụ a ndenye aha na-Rhapsody zere nbudata music iwu na-akwadoghị ugbu a na m na-akwụ ụgwọ maka music, ga-amasị m zuru uru nke ya. -Aaron Warnick
Mgbe ị download music si Rhapsody, nwere ike ị nyefee Rhapsody ka iTunes na-etinye ya na gị na iPod? Ọtụtụ ndị na-ajụ m ajụjụ a. My azịza bụ na-ee. Ụfọdụ Rhapsody songs nwere ike a na-dị n'ime iTunes ma ọ bụrụ na ị ga-esi ha na faịlụ MP3 mgbe zụrụ. Otú ọ dị, Ohere inweta bụ ị ga-ada mbubata ụfọdụ Rhapsody faịlụ.
Echegbula. Ị nwere ike iji Streaming Audio Recorder. Ọ bụ ihe niile-na-otu Rhapsody ka iTunes Ntụgharị, na-enyere gị iwu wepụ ihe ọ bụla mgbochi na Rhapsody music na n'out oge nyefee Rhapsody ka iTunes effortlessly. Aga m kọwaa usoro n'okpuru.
1 Wụnye a Rhapsody ka iTunes Ntụgharị
Download na wụnye a smart ngwa. Ukwu a ngwa dị ebe a.
2 Download Rhapsody ka iTunes
Na-agba ọsọ a Rhapsody ka iTunes Ntụgharị ịbanye ya isi interface. Mgbe ahụ see "Record" bọtịnụ na n'elu-akaekpe. Mgbe ahụ na-egwu otu Rhapsody song ị chọrọ nyefee. Ugbu a, a smart ngwa Ndekọ song. Ozugbo song dị n'elu, na ndekọ ga-akwụsị ozugbo.
Cheta na: Nke a ngwa e mere ka ịdekọ audio site na kọmputa gị ụda kaadị. Ya mere ọ bụrụ na ị na-Rhapsody song egwu were were n'oge ndekọ, i nwere ike inwe ya na mbụ audio mma.
3 Nyefee Rhapsody ka iTunes
Gaa a ngwa si n'ọbá akwụkwọ ka a mata ndị ahụ e dere Rhapsody song, wee pịa "Tinye ka iTunes" button na ala nke isi interface. Mgbe mgbe, gị iTunes ga-akpaghị aka ẹkedori, na-egosi Rhapsody song n'ihu unu. Ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-mmekọrịta ya na gị na iPod maka ntụrụndụ na ọ laa, dị nnọọ na-aga n'ihu!
Cheta na: Iji chọta ebe Rhapsody songs na-echekwara na kọmputa gị, dị nnọọ họrọ songs na nri-pịa ha aka ịhọrọ Open na nchekwa. Mgbe ahụ, ị ​​nwekwara ike iji aka nyefee songs ka iTunes site na-ahọpụta "File"> "Tinye nchekwa Library".